8 mmemme kachasị mma iji swipe na PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
8 kacha mma ngosi mmịfe software na PC
Onye ọ bụla chọrọ ihe ngosi mmịfe nwere ike ịnwe ọtụtụ nhọrọ, ma ọ bụ ibudata kọmputa ma ọ bụ jiri ntanetị na ihe nchọgharị. Enwere ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere ịmepụta ihe ngosi na ederede, egwu, foto na vidiyo. N'ime ọtụtụ n'ime ha, ọ dịghịdị mkpa ịnweta ahụmịhe na ngwa nke ụdị a iji chọọ ha mma. Lelee!
Prezi nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ imepụta ihe ngosi dị egwu. Ihe ngosi mmịpụta na-eme mmegharị amamịghe ma mbugharị iji duzie anya gị n'ihe dị mkpa. Enwere otutu nhọrọ maka ndebiri emere nke edoziri edezi, nke ị nwere ike itinye eserese, vidio YouTube na foto.
The free plan (Basic) na-enye gị ohere ịhazi ọrụ 5, nke ndị ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka ọrụ ahụ. Nwere ike ịkpọ ndị mmadụ ndị ọzọ ka ha dezie ọrụ gị na ntanetị.
Kwado (n'efu, na nhọrọ atụmatụ ịkwụ ụgwọ): Weebụ
PowerPoint bụ otu n’ime ndị ọsụ ụzọ ma a bịa na slideshows. Usoro ihe omume ahụ na-enye ọtụtụ ndebiri na ọtụtụ mgbanwe omenala na mmetụta mmegharị. Enwere ike itinye vidiyo, foto, egwu, eserese, tebụl, na ihe ndị ọzọ.
Onye ọrụ ahụ nwekwara ike ịdabere na ọrụ ndekọ ihuenyo nke ngosi, gụnyere nkọwa. Nakwa idetu ihe naanị ndị na-eme ihe ngosi na-ahụ. Sọftụwia ahụ na-eche nke ọma maka ndị jirila ngwa ndị ọzọ na Office Office.
Power Point (akwụ ụgwọ): Windows | macOS
PowerPoint n'ịntanetị (n'efu, na nhọrọ atụmatụ ịkwụ ụgwọ): Weebụ
3 Gosi Gosi
Zoho Gosi bụ ngwa yiri PowerPoint, yana iji nweere onwe ya. Ọrụ a dakọtara na ngwa Microsoft, na-enwe ike imeghe ma chekwaa ọdịnaya dị na pptx. Na ntanetị, na-enye gị ohere idezi ọnụ na ihe ruru mmadụ 5 na-akwụghị ụgwọ.
Ngwa ahụ na-enye ọtụtụ ndebiri slide na isiokwu, enwere ike ịgwakọta ya ngwa ngwa. Enwere ike itinye foto, GIF na vidiyo (site na PC ma ọ bụ YouTube) ma tinye njikọ sitere na Twitter na ụfọdụ saịtị ndị ọzọ, dịka SoundCloud. Enwekwara ngwaọrụ maka mgbanwe mgbanwe na ndezi onyonyo.
Zoho Gosi (n'efu, dị ka nhọrọ maka atụmatụ akwụ ụgwọ): Weebụ
4. Ihe ngosi Google
Google slides (ma obu Google slides) bu so na ngwungwu Drive. N'iji mfe iji interface, ọ na-enye nhọrọ isiokwu n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. A na-egosipụta ọrụ ndezi ndebiri na ogwe ngwaọrụ.
Ihe oru ngo a nwere ike ime otutu mmadu n’otu oge, naanị na onye okike na-agwa njikọ ma obu na-acho. Ngwa ahụ na - enye gị ohere itinye foto, ụda, tebụl, eserese, eserese, vidiyo YouTube, wdg. Enwere ike ịlele nsonaazụ ahụ n'ịntanetị ma ọ bụ chekwaa ya na pptx, PDF, JPEG, n'etiti usoro ndị ọzọ.
Ngosi Google (n'efu, na nhọrọ iji kwụọ ụgwọ atụmatụ): Weebụ
5. Nnukwu ọgbakọ
Usoro mmemme nke ihe ngosi nke ngwaọrụ Apple, Isi ihe nwere ọtụtụ ndebiri akwadebe maka ndị na-achọghị igbu oge. A ka nwere ọtụtụ mgbanwe mgbanwe. Nwere ike igosipụta ederede na ndò na textures wee dọrọ ụzọ nke ihe, dị ka ụdị na ihe oyiyi.
Onye ọrụ ahụ nwere ike itinye foto, vidiyo, egwu, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na iCloud mwekota na-nyeere, ọ ga-ekwe omume idezi ya na ndị ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha na-eji Windows. The ngwa nwere ike ịgụ pptx oru ngo na-azọpụta ha na Microsoft software usoro.
Isi (n'efu): macOS
Genially bụ nhọrọ iji mee ihe ngosi slide mara mma n’enweghị ihe ọmụma banyere ngwa ngosi. Weebụsaịtị ahụ na-enye ọtụtụ ndebiri, yana ọtụtụ nhazi. Enwere nhọrọ maka slides na ndepụta ndị e gosipụtara, onyonyo ma ọ bụ ahịrịokwu, usoro iheomume, na ndị ọzọ.
Ya mere, jiri ndị nke ị chọrọ tụfuo ndị nke ọzọ. Nwere ike idezi nke ọ bụla ma fanye foto, GIF, vidiyo, na ọdịyo, yana ihe osise eserese. Naanị ihe bụ na enwere ụdị nke enwere ndị ọrụ ndị ọzọ.
N'enweta (n'efu, na nhọrọ iji kwụọ ụgwọ atụmatụ): Weebụ
7. Onye na-eme ihe ngosi ihe onyonyo onyonyo
Icecream Ihe ngosi mmịfe Maker bụ nhọrọ ọzọ maka ndị na-ahọrọ ibudata mmemme na PC ma rụọ ọrụ na ntanetị. Ebumnuche nke ngwa a iji mepụta ihe ngosi foto na egwu.
Mana enwere ike itinye ọdịnaya ederede ma jiri ọdịyo dị iche iche maka slide ọ bụla ma ọ bụ otu egwu ahụ niile na ọrụ ahụ. Freedị n'efu na-enye gị ohere ịchekwa nsonaazụ naanị Webm ma na-enye njedebe nke foto 10 kwa ngosi.
Onye na-eme ihe ngosi ihe nkiri Ice Cream (n'efu na oke ego): Windows
Adobe Spark bụ onye nchịkọta akụkọ ntanetị nke na-enye ihe ngosi ngosi nke kensinammuo. Na mgbakwunye na nhọrọ isiokwu, enwerekwa slide slide n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. Enwere ike itinye foto, vidiyo, ederede, egwu na ọbụlagodi olu gị.
Oge nke ihe oyiyi ọ bụla nwere ike gbanwee n'ụzọ dị mfe, n'akụkụ aka nri ala. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ọtụtụ aka, ị nwere ike ịkekọrịta njikọ ahụ ma ọ bụ kpọọ onye ọ bụla ịchọrọ. Enwere ike ịlele ọdịnaya ahụ na ntanetị ma ọ bụ budata na vidiyo (MP4). Versiondị nweere onwe ya gụnyere akara Adobe Spark.
Adobe spark (n'efu, ma akwụ ụgwọ atụmatụ): Weebụ
Ndụmọdụ maka ịme ngosi mmịfe dị mma
Atụmatụ ndị a sitere n'aka Aaron Weyenberg, UX Onye isi maka TED, ọrụ mkparịta ụka dị mkpirikpi, nke nwere ọtụtụ isiokwu. Ọdịnaya dị na ya dum na TEDBlog n'onwe ya. Lelee ụfọdụ n'ime ha.
1. Chee echiche banyere ndị na-ege ntị
Echela ihe mmịfe dị ka ngwa ọrụ nkọwa iji gosi ihe ngosi gị. A ghaghi ime ha maka ohaneze, na-achota nnyefe nke ihe omuma ihe na-agbakwunye ihe ekwuru.
Zere itinye ọtụtụ ederede. Dị ka Weyenberg si kwuo, nke a na-ekewa uche nke ndị na-ege ntị, ndị na-amaghị ma ha ga-agụ ihe edere ma ọ bụ gee ntị n'ihe a na-ekwu. Ọ bụrụ na enweghị ụzọ ọzọ, kesaa ọdịnaya n'ime isiokwu ma gosi ha n'otu n'otu.
2. Nọgide na-enwe ọkọlọtọ ọhụụ
Gbalịa idobe ụcha agba, edemede font, onyonyo, na ntụgharị n'oge ngosi ahụ.
3. Ajula nsogbu dị na ya
Ọ naghị eji ntụgharị. Maka ọkachamara ahụ, nhọrọ ndị dị egwu na-enye echiche na nkwupụta ha ga-abụ ihe na-agwụ ike na naanị ihe ndị ahụ etubigara ókè ga-eme ka ndị na-ege ntị si na ịda mba ha.
Gosipụta ojiji nke ihe ndị a n'ụzọ dị oke mkpa ma ọkacha mma naanị ndị nwere aghụghọ karịa.
4. Ejila autoplay na vidiyo
Programsfọdụ mmemme ngosi na-enye gị ohere igwu vidiyo ozugbo slide mepere. Weyenberg na-akọwa na ọtụtụ oge ọ na-ewe ogologo oge maka faịlụ ahụ ka ọ malite igwu egwu ma onye na-eweta ihe a pịa chịa otu oge iji gbalịa ma malite.
N'ihi: slide na-esote na-egosi na-egosi n'oge na-adịghị anya. Iji zere ụdị mmachi ndị a, nhọrọ kachasị mma abụghị ịhọrọ maka mmeputakwa onwe.
Free ngwa iji mee vidiyo na foto na egwu na mkpanaka gị
Otu esi eme ka ọkọlọtọ na PowerPoint n'amaghị otu esi edezi
Ndị editọ ederede kachasị mma na ntanetị